Virtualization: Avadiho ho tontolo iainana sahaza azy ny GNU / Linux Distro | Avy amin'ny Linux
La Virtualization Amin'ny maha-foto-kevitra ara-teknolojia azy dia lohahevitra midadasika izy io, izay sarotra indraindray ny manazava azy, na izany aza, amin'ny fotoana hafa dia voaresaka ao amin'ny Blog izy io, mahafa-po.
Vokatr'izany, ity publication ity dia mikendry ny hamaha kely kokoa ny olana amin'ny lafiny teknikan'ny Rafitra miasa GNU Linux / BSD, manasongadina indrindra, amin'ireo kely ireo vahaolana rindrambaiko tafiditra ao amin'izy ireo mba hanatanterahana an'io asa io.
1 Inona no atao hoe Virtualization?
2 Virtualization: Fampiharana sy fonosana tsotra azo alaina
2.2 Boaty GNOME (boaty)
2.5 Tranomboky sy fonosana mifandraika (fiankinan-doha)
2.6 ny hafa
2.7 Fanamarihana manan-danja
Inona no atao hoe Virtualization?
Raha fintinina vetivety dia hiresaka hevitra iray avy amin'ny anay izahay Lahatsoratra mifandraika teo aloha, ka raha misy antoko liana maniry ny aorian'ny famakiana ity boky ity handalina ny lohahevitra dia ananan'izy ireo izany:
"Ny Virtualization of Operating Systems amin'ny ankapobeny dia misy ny fahafahany mizara amin'ny Hardware mitovy amin'ny Operating Systems izay miasa amin'ny fomba mahaleo tena tanteraka, fa ny rehetra kosa dia mifantoka amin'ny fanamorana amin'ny ambaratonga lehibe kokoa na kely kokoa ny fanaovana virtoaly saika OS manokana (vahiny) na OS iray. (mpampiantrano), mba hizaha toetra azy ireo fa tsy manana kapila mafy."
"Ny haitao rehetra misy amin'izao fotoana izao dia manana ambaratongam-pahasarotana samihafa amin'ny fametrahana azy, ny fametrahana azy, ny fampiasana azy ary ny fahazoana miditra ary ny fahazoana miditra amin'ireo antontan-taratasy ilaina hifehezana azy ireo."
Virtualization: Fampiharana sy fonosana tsotra azo alaina
Ireto ambany ireto dia holazainay ny sasany amin'ireo rindranasa malaza sy be mpampiasa indrindra sy / na ampiasaina ao amin'ny Rafitra miasa GNU Linux / BSD, na amin'ny sehatry ny tena manokana, izany hoe, Distros ampiasaina amin'ny tanjona manokana (trano), ary amin'ny sehatry ny matihanina, izany hoe eo amin'ny sehatry ny lohamilin'ny fikambanana sy orinasa.
Zava-dehibe ny manamarika fa ity lisitra ity dia tsy hampiditra ireo teknolojia virtualization izany dia tonga toy ny vahaolana mitambatra, amin'ny-iray na turnkey, toy ny Promox.
VirtualBox Is a Type 2 Hypervisor multiplatform, izany hoe tsy maintsy atao ary azo atao (apetraka) amin'ny Host rehetra (Computer) misy ny kinova ankehitriny na taloha Rafitra miasa Windows, Linux, Macintosh, Solaris, OpenSolaris, OS / 2, ary OpenBSD.
Tompona a tsingerin'ny fampandrosoana mitohy sy mandroso miaraka amina famoahana matetika, izay mahatonga azy io ho safidy tsara hafa ho an'ny vahaolana hafa mitovy amin'izany, nefa tena misy isa isan'ny endri-javatra sy fiasa, Rafitra sy sehatra fandefasana mpitsidika an-tanana tohanan'ny.
Amin'ny ankabeazan'ny GNU Linux / BSD Distro voalaza fa ny fampiharana dia tafiditra ao amin'ny trano fitahirizana, noho izany, miaraka amin'ireto manaraka ireto baiko baiko matetika napetraka ao amin'izy ireo:
Tsara homarihina ho an'ny VirtualBox fa, rehefa mampiasa an'ity rindrambaiko ity, ny fametrahana ny «Fanampian'ny vahiny» ary ny "Extension Pack". Noho izany, ho an'ity sy ny endrika fametrahana hafa, ny tena tsara dia ny fitsidihana ireto manaraka ireto Rohy ofisialy VirtualBox. Mandritra izany fotoana izany, raha te handalina ny lafin-javatra sasany amin'ny VirtualBox ianao dia afaka mitsidika ny fanontana teo aloha mifandraika amin'izany:
Boaty GNOME (boaty)
GNOME Boxes dia fampiharana teratany an'ny Birao GNOME, izay ampiasaina hidirana amin'ny rafitra lavitra na virtoaly. Boxes na Boxes, mampiasa ny teknolojia virtualization an'ny QEMU, KVM ary Libvirt.
Ho fanampin'izay dia mitaky ny Unité centrale mifandraisa amina karazana virtualization ampian'ny hardware (Intel VT-x, ohatra); Araka izany, GNOME Boxes tsy mandeha ao CPUs miaraka amin'ny processeur Intel Pentium / Celeron, satria, tsy manana an'io toetra io izy ireo.
Ilaina ny manasongadina GNOME Boxes izany, izy io dia fitaovana tena tsotra iray kendrena ho an'ireo mpampiasa vao tonga sy vaovao ho an'izao tontolo izao Linux, satria tsy mampiditra be loatra safidy fanovana izay mazàna no be mpampiasa sy be mpampiasa, toy ny VirtualBox. Raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity rindranasa ity dia ny fitsidihana ireto manaraka ireto no tena mety Rohy ofisialy GNOME Boxes. Raha te handalina azy io ao amin'ny bilaoginay ianao, dia afaka mitsidika ny fanontana teo aloha mifandraika amin'izany:
Virt Manager dia fampiasa amin'ny birao ho an'ny fitantanana Virtual Machine Manager amin'ny alàlan'ny libvirt. Ny masinina virtoaly tantanan'i KVM, fa izy ihany koa dia mitantana ireo izay tantanan'ny Xen y LXC.
Virt Manager manolotra fomba fijery famintinana ireo domains mihazakazaka, ny zava-bitan'izy ireo mivantana, ary ny statistikan'ny fampiasana loharano. Ireo mpamosavy dia mamela ny famoronana domains vaovao, sy ny fikirakirana sy ny fanitsiana ny fizarana loharano amin'ny sehatra sy fitaovana virtoaly virtoaly. Mpijery mpanjifa VNC y zava-manitra Ny Integrated dia manolotra console feno sary ho an'ny faritry ny vahiny.
Ilaina ny manasongadina Virt Manager izany, fitaovana tsotra ihany koa izy io, na dia feno kokoa noho ny GNOME BoxesNoho izany dia azo raisina ho an'ny mpampiasa antonony na mandroso amin'ny ambaratonga voalohany izy, satria mora mamela ny fitantanana ny tsingerin'ny fiainana manontolo misy ireo milina virtoaly efa misy. Raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity fampiharana ity dia ny fitsidihana ity manaraka ity no tena mety Rohy ofisialy Virt-Manager. Raha te handalina azy io ao amin'ny bilaoginay ianao, dia afaka mitsidika ny fanontana teo aloha mifandraika amin'izany:
Qemu dia milina virtoaly malalaka sy misokatra loharano virtoaly ary emulator, afaka mihazakazaka rafi-pandidiana sy programa natao ho an'ny milina iray amin'ny masinina hafa miaraka amina fahombiazana tena tsara, ary afaka mahavita fampisehoana eo amin'ny toerana akaiky azy amin'ny alàlan'ny famindrana kaody vahiny mivantana amin'ny CPU avy amin'ny mpampiantrano. .
KVM dia vahaolana virtoaly feno ho an'ny Linux amin'ny hardware x86 misy fanitarana virtualization (Intel VT na AMD-V) misy modely kernel azo entina, izay manome fotodrafitrasa virtualization fototra sy maodelin'ny mpanodina manokana. Ary miasa ankehitriny tafiditra ao anatin'ny Qemu izy io.
Ilaina ny manasongadina Qemu-KVM izay fitaovana iray tena feno ihany koa, satria tsy manahafa azy io fa manao virtoaly ihany koa, tsy toy ireo hafa mandroso toa ny wmware, izay mamela ny virtualisation ihany. Raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity fampiharana ity dia ny fitsidihana ity manaraka ity no tena mety Rohy ofisialy Qemu-KVM. Raha te handalina azy io ao amin'ny bilaoginay ianao, dia afaka mitsidika ny fanontana teo aloha mifandraika amin'izany:
QEMU 5.1 dia eto ary miaraka amin'ny fanovana 2500 ary ireo no zava-dehibe indrindra
Tranomboky sy fonosana mifandraika (fiankinan-doha)
Ireto fonosana farany 3 voalaza etsy ambony ireto dia matetika mametraka mpiorina (mifandraika) hafa ho fiankinan-doha, noho izany, raha ilaina dia azon'izy ireo atao ny mametraka azy ireo, miaraka amin'ny fiankinan-doha aminy sy fonosana ilaina ilaina hafa, manatanteraka ity baiko manaraka ity:
Raha te-hametraka hafa ianao teknolojia virtualization misy amin'ny Linux / BSD afaka misafidy ny:
Mametraka azy amin'ireto baiko baiko manaraka ireto:
Mametraka azy manaraka ny Lahatsoratra mifandraika teo aloha miaraka amin'ny lohahevitra:
Aza adino fa ny anaran'ny fonosana rehetra voalaza eto dia mety miovaova kely arakaraka ny GNU Linux / BSD Distro ampiasainao, ka raha tsy mihazakazaka mametaka iray ianao dia hadihadio ny anaran'ny marina na ny mitovy aminy ao amin'ny Distro anao.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Tecnologías de virtualización» voalaza eto, noho ny fahatsoran'ny fametrahana sy ny fampiasa amin'ny ankamaroan'ny GNU / Distros Linux; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Virtualization: Avadiho ho tontolo sahaza azy ny GNU / Linux Distro anao
Voider dia hoy izy:
Te-hanamarika fotsiny aho fa raha ny marina, ny Gnome Boxes dia miasa, farafaharatsiny amin'ny Celeron 3350, miaraka amin'ny kinalan'ny fampiharana nomen'ny Arch Linux.
Mamaly an'i Voider
Miarahaba anao, Voimer. Misaotra anao tamin'ny hevitrao ary manome ny zavatra niainanao momba ny Box Gnome.
Safidy tena tsara, izay nampiasako, ny GNU / Debian miaraka amin'ny Proxmox VE: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Buster
Miarahaba, José Luis. Misaotra tamin'ny hevitrao. Faly izahay fa tena nahasoa sy nampanan-karena anao io.